Ogaden News Agency (ONA) – Akhriso Silsiladda Dahabiga ah ee labaxday “Garab istaag xoreynta Ogadenya” Qeybta,1aad- By: Xaaji M/rashiid.
Akhriso Silsiladda Dahabiga ah ee labaxday “Garab istaag xoreynta Ogadenya” Qeybta,1aad- By: Xaaji M/rashiid.
Posted by Daljir	/ May 16, 2018
Kusoo dhawaada Qormada dahabiga ah ee labaxday “Garab istaag xoreynta Ogadenya”- Sida la ogayahay waxaa dunida sadexaad kusoo duulay guumaystihii cadaa ee reer Yurub kuwaasoo hadafkoodu ahaa inay qabsadaan wadamadaas iyo dadkooda. Xalaada ay umadahaasi sabankaas ku sugnaayeen waxay ahayd mid kala duwan. Qaarbaa diin iyo dhqamba haystay qaarna way faro madhnaayeen waxayna ahaayeen cawaan aan lahayn Diin, aragti iyo aqoon ay kaga hortagaan guumaystaha, waxayna udhag raariciyeen aduunyadii yarayd ee loo saydhay!.
Kuwii haystay diinta islaamka iyo dhaqanka wanaagsan ayaa sammeeyay iska caabin xooggan, iyagoo diidanaayeen in dhalan rog lagu sameeyo diintooda iyo dhaqankooda,.sidaa darteed Guumaystihii reer yurub wuxuu kala kulmay dagaal qadhaadh oo uuna filaynin. Waxaa xusid mudan inaan dadku haysanin hub casri ah, balse waxay haysteen niyad bir ha iyo go’aan geesinimo leh, waxayna ku kalsoonaayeen Fardahooda, Falaadhahooda, iyo Waramadooda. Dalalka uu Guumaystuhu si aad ah isugu baladhiyay waxaa kamid ahaa dunida Carabta, Asia iyo Afrika.
Waxaa kamid ahaa umadaha la qabsaday umada soomaaliyeed guud ahaanteed oo runtii deganaa dhul aad u baaxad wayn kheyraadkuna ceegaago. Soomaalidu waxay ahayd umad baraarugsan oo fahansan ujeedada gurracan ee guumaystaha. Gobolada kala duwan ee dalka dhibaato culus ayaa ka qabsatay guumaystaha ila maantana wuu xusuusanyahay. Waxaa guushaas sabab u ahaa gurmadkii ay soomaalidu isu fidinayeen iyo isu hiilintoodii.
Guumaystihii reer Yurub wuxuu isticmaalay istiraaji khatar ah kadib markuu arkay inaan dadka soomaaliyeed la loodin Karin, kasoo ahaa in shan meelood loo qeybiyo bulshada isagoo kadhigay sadan- Koonfur, Waqooyi, Saaxil (Jibuuti), NFD iyo Ogaden. Hadii lasoo gaadhay waqtigii xorriyadda la qaadanayay waxaa nasiib wanaag xorriyad qaatay Koofurta iyo waqooyiga oo labaxay Jamhuriyadda Soomaaliya.
Labada gobol ee kala ah NFD iyo Ogaden waxaa lagu kala daray labada Afrikaan ee geesaha kaxiga kuwaasoo kala ah Kenya & Itoobiya. Gobolka Saaxil waxaa ku dhagay oo laga fujin kari waayay nidaamkii Faransiiska.ee haystay. Waxaa si qiiro kujirto loo mideeyay maskaxdii aqoonyahanka soomaaliyeed waxaana hiil iyo hooba la isla garab taagay reer Saaxil. Waxaa qiiradaa sal u ahaa- siday ku dhici kartaa in la adoonsado umad soomaaliyeed oo walaalaheen ah!, natijadii halgankuna waxay noqotay in dalkii la xoreeyay oo bixiyay Djibuti.
Dhanka kale Gobolka NFD oo isna ay mar walba ay soomaalidu isha ku haysay waxay dadkiisu soo mareen dhibaato iyo hagardaamo kasoo gaadhayay dhanka dawladda. Waqigan xaadirka waxay dadka gobolku sheegayaan inay ciddii ay rabaan dooranayaan, cidayna rabina diidayaan, sidoo kalana ay waxbarashada iyo nolosha asaasiga ah ula simanyihiin dalka intiisa kale.
Gobolka ii soo hadhay waa Ogaden oo ah mid ay qiiqa iyo qayladu isla oogsadeen.
Waxaa la odhan karaa geed xanan ah umbaa umadaas madaxa loo galiyay. Waxaa gabi ahaamba la iska hortaagay noloshii asaasiga aheyd sida nabadda, caafimaadka, waxbarashada iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah ruuxa bani’aadamka ah. Taas weeye mida kaliftay inayna shacabkaasi maalin kaliya ogolaanin adoonsiga. Hadayba jirto cid is wadiinaysa maxay shacabka ree Ogadenya u dagaalamayaan, jawaabtu waa taas aan soo sheegay!
Anigoo wali kujira daadihinta Silsiladda dahabiga ah ee labaxaday “Garab istaag xoreynta Ogadenya” wuxuu caalamku si buuxda ula socdaa hardanka mandiqada ka aloosan ee ku salaysan guumayste iyo guumaysi diide. Waxa ugu qaalisan insaanka agtiisa waa Nafta iyadii baana loogu yimid dadkaas- si fudud ayaa loo dilaa labana isma waydiiso! Dumarka wixii la doono ayaa laguu sameeyaa! Odayaasha caruurtooda ayaa lagu hor dilaa kadibna layidhaa car aasa! Dhalinyarada qasab ayaa lagu ciidameeyaa! Tuulooyinka waa lagubaa dadkana waa laga qixiyaa! Shaqsiga aqoonta leh ama aragtida wanaagsan cagta hoosteeda ayaa la galiyaa!. Xoolaha waa la iska qashaa, Baabuurtana waa la iska gidhaashtaa! Waxaas oo jariimo waxaa masuul ka ah ciidamada itoobiya iyo maleeshiyada ay bulshada kadhex qorteen!
Dadka aan taageerada halganka ka dalbanayo waa guud ahaan umadda soomaaliyeed magaca uu doono ha wato ama gobolka uu doono haka soo jeedee, waxaana cod dheer ku leeyahay ­“Garab istaag xoreynta Ogadenya” sababtoo ah waxaan ogahay in markuu xoroobo aad kusoo ordi doonto adigoo ku doodaya inuu dalkaagii yahay! Hadaba maantuu dalku xoreyn ubaahan yahay iyo in Guumeystaha madaw laga sifeeyee dhankaaga kaga dhufo. Waxaa la xasuustaa in ree Ogadenya ay ahaan jireen kuwo kadhex muuqda isla markaana qeyb Libaax kaqaata halgamadii lagu xoreeyay Gobolada soomalida.
Soomaaliga siyaasiga ah waxaa la gudboon inuu dhanka siyaasada ka taageero halganka, kan maalka haysta dhanka dhaqaalaha haka taageero halganka, kan saxaafadda haysta dhanka faafinta wararka halganka taageero haka geysto. Si kastaba ha ahaatee Soomaalida Ogadenya oo caalamka ku kala baahsan ayaa isha ku haya cidda taageeraysa halgankooda iyo cidda hagardaamada ku haysa.
Isku soo wada duuboo Silsiladan dahabiga ah ayaa xambaarsan fariin culus oo ruux waliba fahmi karo tasoo ah- “Garab istaag xoreynta Ogadenya”